Degso PhotoScape loogu talagalay Windows
Madal: Windows Luqadda: English
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (20.05 MB)
PhotoScape waa barnaamij tafatirka sawir bilaash ah oo loo heli karo Windows 7 iyo kombiyuutaro ka sareeya. Waa tifaftire sawir bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad si fudud ugu fuliso dhammaan noocyada sawirrada iyo howlaha tafatirka sawirrada kombiyuutarkaaga. Barnaamijka, oo si fudud ay u isticmaali karaan isticmaaleyaasha kombiyuutarrada dhammaan heerarka kala duwan, wuxuu ku siinayaa astaamaha barnaamijyo badan oo tafatirka sawirada suuqa ay ku bixiyaan bilaash. Sawirada X ee loogu talagalay Windows 10 ayaa lagula talinayaa.
PhotoScape, oo sidoo kale leh taageero luuqada Turkiga ah, ayaa u oggolaanaysa isticmaaleyaasha Turkiga inay si fudud u fahmaan dhammaan noocyada shaqooyinka isla markaana ay si dhakhso leh ugu fuliyaan howlaha tafatirka sawirrada ay rabaan.
Sidee loo rakibaa PhotoScape?
Waxaad sameyn kartaa howlo badan sida sawirka iyo sawir goynta, dib u habeynta, dejinta qaabeynta, saameynta iyo miirayaasha, xulashooyinka nalka, kala duwanaanta, dhalaalka iyo sameynta dheelitirka midabka, wareegga, saamiga iyo goobaha isu dhigma, ku darista iyo tafatirka looxyada iyadoo la kaashanayo PhotoScape;
Sawir qaadista PhotoScape
Goynta sawir PhotoScape
Tafatirka sawirka PhotoScape
Sawir qaadista PhotoScape wax ka beddelka
Ka qaadista asalka ah PhotoScape
Waxay sidoo kale soo jiidanaysaa dareenka oo ah barnaamij aad u guuleysta maadooyinkiisa. Ka mid ah qaababka caanka ah ee PhotoScape;
Daawade: Arag sawirada galkaaga, samee muqaal duubo.
Tifatiraha: Cabirida, dhalaalka iyo isku hagaajinta midabka, dheelitirka cad, toosinta tooshka, looxyada, buufinnada, qaabka mosaicka, kudar qoraalka, sawiro sawiro, dalag, miirayaal, isha casaan, dhalaalaya, burushka rinjiga, qalabka shaabadda dhejiska, burushka saameynta
Tifatiraha Dufcaddii: Tafatir sawirro badan oo dufcad ah.
Bogga: Abuur sawirka ugu dambeeya adigoo isku daraya sawirro badan oo ku yaal bogga.
Isku dar: Abuur sawirka ugu dambeeya adoo kudaraya sawirro badan oo qumman ama jiifa.
GIF-ga Animated: Abuur sawirka ugu dambeeya adoo adeegsanaya sawirro badan.
Daabac: Daabac sawirada sawirka, kaararka ganacsiga, sawirada baasaboorka.
Kala: U qaybi sawir dhowr qaybood.
Taariikhqorihii Screen: Qabashada iyo badbaadin shaashadda aad.
Midab Qaadaha: Muuji Sawirada, raadso oo dooro midab.
Magacaab: Beddel magacyada feylka sawirada sawirada qaabka dufcadda.
U-beddelaha RAW: U beddel RAW qaabka JPG.
Qaadashada Daabacadaha Warqadda: Daabac xariiq, jaantus, muusig iyo waraaqda kalandarka.
Raadinta Wejiga: Ka hel wejiyo isku mid ah internetka.
Sida loo Isticmaalo PhotoScape
Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo kala duwan oo aad u isticmaali karto shaashadda weyn ee soo muuqata marka aad socodsiinayso PhotoScape markii ugu horreysay ka dib markii aad ku soo degsatay kombuyuutarkaaga. RAW Beddelaha, Qabashada Shaashadda, Midab Ururiyaha, AniGif, Isku dar, Tifatiraha Dufcaddii, Tifatiraha iyo Daawade waa dhowr ka mid ah xulashooyinkaas Ka dib markaad gujiso xiriiriyaha xulashada aad rabto inaad isticmaasho, waxaad si dhakhso leh u bilaabi kartaa inaad isticmaasho mid ka mid ah badhannada kuu oggolaanaya inaad sameyso dhammaan goobaha aad rabto.
Waxa aad rabto inaad ku sameyso PhotoScape, oo leh astaamo badan oo ku saabsan barnaamijyada tafatirka sawir xirfadeed kuna siiya bilaash, waxaa kaliya ku xaddidan malahaaga. Haddii aad rabto, waxaad ku sameysan kartaa isku-dhafnaan sawirradaada ah, waxaad ku dari kartaa shaandhooyinka sawirradaada, ama waxaad diyaarin kartaa gifs firfircoon.
Xaqiiqda oo ah in dhammaan noocyada sawirrada iyo qalabka tafatirka sawirrada ee aad u baahan karto ay ku yaalliin hal is-dhexgalka adeegsadaha fudud oo fudud ayaa ka dhigaya PhotoScape wax badan oo soo jiidasho leh dadka isticmaala. Taasi waa sababta haddii aad u baahan tahay barnaamij tafatir sawir oo bilaash ah oo si fudud loo isticmaali karo, waa inaad xaqiiqdii isku daydaa PhotoScape.
Waxay ka dhigeysaa wax fudud in lala isticmaalo dejimaha otomaatiga ah.
Waxay bixisaa taageero luqadda Turkiga ah.
Comprehensive oo gebi ahaanba bilaash ah.
Waxay qaadataa tababar in si hufan loo isticmaalo qalabka.
Cabirka Faylka: 20.05 MB
Wararkii Ugu Dambeeyay: 29-06-2021
Thanks to FastStone Photo Resizer, waxaad u beddeli kartaa qaababka sawirradaada si aad u badan,...
Adobe Photoshop Elements waa barnaamij sawir oo guuleysta oo loo bixiyo sidii nooc la fududeeyay ee...
PhotoScape waa barnaamij tafatirka sawir bilaash ah oo loo heli karo Windows 7 iyo kombiyuutaro ka...
IrfanView waa muuqaal daawade bilaash ah, aad u dhakhso badan oo yar oo sameyn kara waxyaabo...
Total Watermark waa barnaamij biyo -calaamadeyn ah oo loogu talagalay in looga hortago in sawirrada...
Barnaamijka JPEGmini wuxuu ka mid yahay codsiyada yarayn kara xajmiga sawirka iyo feylasha...
ImageMagick waa tifaftire sawir oo tafatirka sawirrada dhijitaalka ah, abuurista sawirrada bitmap...
Maalin kasta waxaan la kulannaa in Minecraft ay ka badan tahay ciyaar oo ay u sii dhowaaneyso oo...
Adobe Dimension waa barnaamij loogu abuurayo sawirro 3D dhab ah oo sawir leh oo loogu talagalay...
Barnaamijka Qabashada Qarsoon waa barnaamij lacag laaan ah oo loo diyaariyey kuwa doonaya inay...
Xusuusin: Xiriirka soo dejintu waa la tirtiray sababta oo ah faylka rakibidda barnaamijka waxaa...
Maqaalka Sawirka Qosolka leh waa codsi waxtar leh oo la isku halleyn karo oo loogu talagalay in...